Tommy's Love Stories: Flame of Love - Chapter 12
Flame of Love - Chapter 12
အိမ်ကိုရောက်တော့ လက်ထဲကပါလာတဲ့ ငုသွယ်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကြမ်းပေါ်ခဏချရင်း၊ သူမကိုယ်တိုင်ပါ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အားအင်ချိနဲ့စွာ လှဲလျောင်းမိတယ်။
မနက်ဖန်ဆိုရင် ခိုင်တစ်ယောက်တည်း နေခဲ့တဲ့ အထီးကျန်တဲ့ ဒီအိမ်ခန်းထဲကို ငုသွယ်ဆိုတဲ့ ဧည့်သည်လေးတစ်ယောက်လာမယ်တဲ့။
ဟုတ်တယ်.. မျိုးကို သူမ မေ့နေခဲ့တာဘဲ..
ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲနေရာမှ ရုတ်တရက် မြန်မြန်ထကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ပြေးပြီး မျိုးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရှေ.မှာ ဒူးထောက်ရင်း …….
ခိုင့်ရဲ့နံဘေးမှာ အရိပ်လိုအမြဲရှိနေတတ်တဲ့ ချစ်သူ..
အရာရာကို အနွံတာခံပြီး၊ ခိုင် ဆိုးသမျှကို အကြင်နာအပြုံးတွေနဲ့ ချစ်ပေးခဲ့သူ…
ခုတော့ ခိုင်အရမ်းအထီးကျန်နေတယ် မျိုးရယ်..
“မျိုးရယ်.. မနက်ဖန် အဲဒီတစ်ယောက် အိမ်ကိုရောက်မယ်… မျိုး စိတ်များဆိုးနေလားဟင်… ခိုင်သစ္စာဖောက်မိနေပြီလား… ခိုင် သူ.အကြောင်းမစဉ်းစားမိအောင်ကြိုးစားပါတယ်… ဒါပေမယ့်…
ခိုင်လေ.. သူ.ကို အချိန်တိုင်း တွေ.နေချင်မိတယ် မျိုးရယ်… ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” အရူးတစ်ယောက်လို မျိုးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးရှေ.မှာ ငိုကြွေးကာ… သူမရဲ့ ညတွေက ထုံးစံအတိုင်း မှောင်မိုက်စွာ အထီးကျန်ရင်း…..
လေးလံစွာပိတ်ကျနေသော မျက်ခွံတွေကို ကြိုးစားအားယူဖွင့်ရင်း သူမကုတင်ဘေးက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေခဲ့တာပါလား။ လက်ထဲက ဓာတ်ပုံ မှန်ဘောင်လေးထဲမှ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ဖြူစင်စွာပြုံးနေသော မျိုးက သူမရဲ့နှလုံးသားနဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာ တစ်ညလုံးနေရာယူထားခဲ့တာကို သတိထားမိသည်။
လက်ထဲမှ မျိုးရဲ့ ဓာတ်ပုံမှန်ဘောင်လေးကို တယုတယ ကုတင်ဘေးမှ စားပွဲခုံပုလေးပေါ် ပြန်တင်ရင်း၊ နံနက်စောစောမှာ ချစ်သူရဲ့ အလှကို တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေဖြစ်သည်။
“ခိုင် သံယောဇဉ်တွေ မကျူးလွန်မိအောင် သတိထားပါ့မယ်၊ မျိုးကို သစ္စာမဖောက်မိအောင်လဲ နေပါ့မယ်၊ အခုတော့ ကတိပေးပြီးသားဖြစ်နေလို. သူ.အတွက် အခန်းပြင်ပေးလိုက်ဦးမယ်နော်” ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို ချော့သလို ဓာတ်ပုံလေးကို တတွတ်တွတ်ပြောရင်း၊ မှန်သားပြင်လေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းကာ အိပ်ခန်းဆီမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
မျက်နှာသစ်ပြီး၊ ဧည့်ခန်းထွက်လာတော့ မနေ့ညက ကြမ်းပေးမှာ ပစ်ပုံထားခဲ့သော ငုသွယ်ပစ္စည်းတွေကို တွေ.မှ အခန်းရှင်းရန်သတိရပြီး၊ တွေ.သမျှအကုန်သိမ်းကြုံးမကာ လွတ်နေသော အိပ်ခန်းအပိုထဲသို. ပြေးရသည်။
အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ အရင်အပတ်ကမှ ဖုန်သုတ် တံမြက်စည်းလှဲထားမိသည်ဆိုတော့၊ အခန်းက ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး ရှုပ်ပွမနေ။
လက်ထဲက ပစ္စည်းများကို နေရာချထားပြီး၊ ပြောင်နေသော ကြမ်းကို တံမြက်စည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လှဲ၊ ဖုန်သေချာသုတ်ပြီး၊ လိုအပ်သော ခေါင်းအုံး၊ စောင်တွေကို နံရံကပ်ဘီရိုလေးထဲမှ ထုတ်ကာ အိပ်ယာပြင်သည်။
Snow White လေးက နူးနူးညံ့ညံ့လေးဖြစ်သောကြောင့် သူမမှာရှိသမျှ အိပ်ယာခင်းအားလုံးထဲက အနူးညံ့ဆုံးဟုထင်ရသော hello kitty အပြာကွက်လေးနှင့် အိပ်ယာခင်းလေးကို ခင်းပေးဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ ပုံစံတူ ခေါင်းအုံးစွပ်လေးနှင့် Duvet အစွပ်လေးကိုပါ သေချာစွပ်ပေးပြီးတော့ သူမအတွက်အိပ်ယာကလေးက အိပ်ချင်စဖွယ် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
လေ၀င်လေထွက်အတွက် ပြတင်းပေါက်လေးတွေကို ဖွင့်ပေးကာ၊ ခြင်လုံသံဇကာအပါးစား တံခါးလေးကိုတော့ ပိတ်ထားလိုက်သည်။
ပြီးမှ သတိရသည်က ခန်းဆီး၊ ဟုတ်တယ်.. ဒီခန်းဆီးတွေကို မလဲဖြစ်တာ တော်တေ်ာကြာပြီ။ နံရံကပ်ဗီဒိုဆီပြန်ပြေးကာ ခန်းဆီးအသစ်ထပ်ထုတ်သည်။
လိုအပ်တာတွေအကုန် လျော်ဖွပ်မီးပူတိုက်ပြီးသား အဆင်သင့်ရှိနေတာဘဲ တော်သေးသည်။ ဒါတွေကလဲ မျိုးသင်ပေးခဲ့သော အကျင့်ကောင်းလေးတစ်ခု။ မျိုးက မိန်းမပီသလွန်းစွာ အရာရာကို သေချာစနစ်တကျ ဖြစ်အောင် ထားသိုတတ်သည်။ ပစ်စလက်ခတ်နေတတ်သော ခိုင့်ကိုလဲ သူမလိုနေတတ်အောင် ချော့တခါ ချောက်တလှည့်နှင့် သင်ပေးခဲ့သောကြောင့် မျိုးမရှိသောဘ၀မှာ မျိုးကိုလွမ်းသည်မှအပ ခိုင်တစ်ယောက် ယောင်ချာချာမဖြစ်ခဲ့ဘဲ အရာရာကို စည်းကမ်းတကျ သပ်ရပ်စွာ ၇ှိနေခဲ့သည်။
မျိုးအကြောင်းတွေးတာ ခဏရပ်ပြီး၊ လက်ထဲက ခန်းဆီးလဲခြင်းအလုပ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ဖြစ်သည်။
ခန်းဆီးလဲပြီးတော့ ရေချိုးခန်းထဲပြေးကာ၊ လိုအပ်ထာတွေသေချာထပ်စစ်သည်။
မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနှင့် ကိုယ်သုတ်တဘက် တစ်ထည်စီ အဆင်သင့်၊ စိုးနွယ်ထည့်ပေးလိုက်သော ငုသွယ်သုံးနေကျ မျက်နှာသစ်ဆေး၊ သွားတိုက်တံနှင့် သွားတိုက်ဆေးဘူးကို မျက်နှာသစ်စင်ပေါ်မှာ နေရာချထားလိုက်သည်။
ပြီးတော့ အိမ်သာအတွက် တစ်ရှူးနှင့် ခြေသုတ်ခုံတွေ ရေစိုမစို သေချာစစ်သည်။
လိုအပ်သည်များကို စိတ်ကြိုက်သေချာစစ်ပြီတော့၊ နာရီကိုကြည့်ဖြစ်သည်။
အိုး… ၁၀နာရီတောင် ထိုးတော့မှာပါလား။ ဒါဆို ခဏနေ ငုသွယ်နဲ့ စိုးနွယ်လာတော့မှာပေါ့။
မောတာကို အနားမယူအားဘဲ ကော်ဖီတစ်ခွက် အမြန်ဖျော်သောက်ကာ ချွေးစိုနေသော သူမခန္ခာကိုယ်ကို ရေအမြန်ပြေးချိုးသည်။
ရင်ထဲမှာ ဘာရယ်မသိ အပျော်တွေအပြည့်နှင့် အရမ်းလန်းဆန်းနေသည်ကို သတိထားမိသည်။
ရေချိုးအပြီး၊ အိမ်နားက စားသောက်ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ကာ နေ့လည်စာအတွက် ထမင်းနှင့် ဟင်းကို လှမ်းမှာသည်။ သူမတစ်ယောက်တည်း နေစဉ်က ဖြစ်သလို စားသောက်ခဲ့ပေမယ့်၊ ငုသွယ်ကိုတော့ နေကောင်းကာစဖြစ်၍ အစားကောင်းကောင်းစားစေချင်သည်။
“ခိုင်… စိုးနွယ်ပါ… လာနေကြပြီလို. လှမ်းပြောတာ..”
“အိုကေ.. စောင့်နေတယ်.. အဆင်သင့်ဘဲ..”
ဖုန်းပြောပြီးမှ သတိရကာ ခုနက ထမင်းဆိုင်ကို ပြန်ထပ်ခေါ်ပြီး၊ အသီးအနှံအချို.နှင့် အအေးကိုပါထပ်မှာသည်။
ရင်တွေလဲခုန်ပြီး စိတ်တွေလဲ လှုပ်ရှားယောက်ယတ်ခပ်နေမိတာ၊ အိပ်ခန်းထဲမှ မျိုးကတော့ ခိုင့်ကို မျက်စောင်းဖျော့ဖျော့လေးထိုးကာ ခွင့်လွှတ်ပြုံးနှင့် နားလည်ပေးမည်ဟုထင်ပါသည်။
Posted by Tommy Girl at 9:23 AM
မနက်ဖန် (၉.၄.၂၀၁၂) ကနေ (၂၉.၄.၂၀၁၂) ထိ ရန်ကုန်သင်္ကြန...
Flame of Love - Chapter 11